Jowhar Oo Si Habsami Ugu Socdaan Ololo Nadaafadeed “Sawirro” – Radio Muqdisho
Jowhar Oo Si Habsami Ugu Socdaan Ololo Nadaafadeed “Sawirro”
Waxaa si habsami leh ugu socda magaalada Jowhar ee Caasimada Gobolka Shabeellada Dhexe Barnaamij Sare loogu Qaadayay is-dhex-galka Bulshada iyo bilic ku soo celinta magaaladaasi oo ay hormuud ka yihiin maamulka maamulka Degmadaasi ayna kala Qayb-qaadanaayaan madaxda maamulka Gobolka.
Wadooyinka magaalada ayaa waxaa lagu arkayaa olole Nadaafadeed oo si xowli ah u socda ayaa waxaa ka qayb-galay ardayda iskuulada degmada wax-ka-barta oo ay ka mid ahaayeen dugsiyada Hoose/Dhexe iyo Sare iyo Shacab, mas’uuliyiinta maamulka.
Gudoomiyaha Gobolka Shabeellada Dhexe, Cali Guud-laawe oo ololahanani nadaafada goob joog ka ahaa ayaa sheegay in bulshada Jowhar looga fadhiyo inay kawada shaqeeyaan bilicda degmada; wuxuuna ku amaanay maamulka Jowhar iyo dadweynaha sida ay arrimaha nadaafadda u maamulayaan.
Ugu dambeyn, Barnaamijkan loogu Magac-daray Is-dhexgalka Bulshada iyo Wax Wada-qabsiga Bulshada iyo Degmada ayaa Noqonaya kii ugu horreeyay ee Gobolka Shabeellada Dhexe lagu qabto, waxaana loo qeybiyay dadka magaalada Jowhar qoraalo lagu dhiira galinayo xoojinta isdhexgalka bulshada iyo bilic soo celinta magaalada.
Ciidamo Boliis Ah Oo Afgooye Xaafada Ka Mid Ah Fariisimo Ka Sameystay